တောင်ဘက်ရာသီဥတုဇုန်ရှိနွေရာသီ - ရာသီဥတုနှင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေရောင်ခြည်များပြားစွာဖြင့်ရောင်းရန်ရှိသောအိမ်ခြံမြေများ!
တောင်ဘက်ပထဝီဝင်ကို Tenerife ၏တောင်ဘက်ရာသီဥတုနှင့်မရောထွေးရန်အရေးကြီးသည်။
အဆုံးမှာရာသီဥတုသာယာသည်။ အချို့လူများသည်နေသာ။ ခြောက်သွေ့သောတောင်ပိုင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
ကျွန်း၏ရာသီဥတုမြေပုံဤတွင်တွေ့ရသည် - တကယ်တော့၎င်းသည်မိုးရွာသွန်းမှုမြေပုံဖြစ်သည်။ The အနီရောင် - လိမ္မော်ရောင်သည်လူများကိုတောင် Tenerife ဟုခေါ်သောအရာကိုကိုယ်စားပြုသည် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤမသိဘဲ) ။ ဒါ့အပြင်သင် apx ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ သင်တောင်တက်စဉ်ကမ်းရိုးတန်းအပူချိန်မှမီတာ ၁၀၀ လျှင် ၁ by စင်တီဂရိတ်ကျသည်။
ကျွန်း၏မြောက်ဘက်တွင်ပထဝီဝင်အစက်အပြောက်အချို့ရှိသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Santa Cruz နှင့် Igueste တို့သည် Tenerife ၏မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိပြီး၎င်းသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးနွေ ဦး ရာသီရာသီဥတုရှိသည်။
Tenerife, El Medano ရှိအဆောက်အအုံတွင်အိပ်ခန်း ၂ ခန်း၊ ရေချိုးခန်း ၁ ခန်း၊ bathroom ည့်ခန်းနှင့်မီတာ ၁၅၀ ရှိသောဥယျာဉ်ရှိတိုက်ခန်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ...
Tenerife, Playa de San Juan ၏တိတ်ဆိတ်သောနေရာတွင်စူပါတောက်ပသော2အိပ်ခန်းတိုက်ခန်း! တိုက်ခန်းသည်ဒုတိယထပ်တွင်တည်ရှိပြီး ...
ရောင်းရန်: San Andres, Tenerife ရှိကျယ်ဝန်းသောတိုက်ခန်း မြို့၏တိတ်ဆိတ်သောနေရာတွင်ကျော်ကြားသော Las Teresitas ကမ်းခြေမှ ၁ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ လှသောအဆင်း...
Los Gigantes, Tenerife ရှိလှပသောတိုက်ခန်း။ သမုဒ္ဒရာ၊ ချောက်ကမ်းပါးများနှင့် Los Gigantes ၏ Marina ကိုမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများ။ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးနေရာ ...
သမုဒ္ဒရာကနေAlcalá 50 မီတာအတွင်းရှိစတိုင်အိမ်!
ရောင်းရန်: Alcala, Guia de Isora, Tenerife ၏မီးဖိုချောင်ရှိအိပ်ခန်း4ခန်း! သမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၅၀ အကွာတွင်တည်ရှိပြီးအဆင့်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
ရောင်းမည် - လှပသောအိမ်လေးဖြစ်သည့် Las Manchas, Santiago del Teide, Tenerife! ၃၆၀ ºပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၊
Tenerife, Playa de la Arena ရှိသမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၅၀ အတွင်းလှပသောတိုက်ခန်းတစ်ခန်းပါ။ မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာ! မြင်ကွင်းကျယ် ...
Tenerife, Arona တွင်ခရီးသွားလိုင်စင်ပါသောတိုက်ခန်းရောင်းမည်။ အိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ ရေချိုးခန်း ၁ ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် living ည့်ခန်း၊ အတွင်းခန်းအပြင် ...
Tourism လိုင်စင်ဖြင့်Alcaláရှိအိမ်၊ !!
ရောင်းရန်ရှိသော Alcala, Tenerife!3ည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် wc အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိကျယ် ၀ န်းသောအိမ်။ ပထမထပ် - အိပ်ခန်း ၃ ခန်း၊
Las Galletas, Arona ရှိသမုဒ္ဒရာမှ Penthouse 50m!
Las Galletas၊ Arona၊ Tenerife ရှိရောင်းမည့်တိုက်ခန်း အံ့သြဖွယ်ရာပင်လယ်ရှုခင်းများ မြို့လယ်ခေါင်တွင်ရှိသောlyရိယာကျယ်ဝန်းသည်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်း!
ကားဂိုဒေါင်၊ ရေကန်နှင့်မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်အတူ duplex!
Las Caletillas၊ Candelarias၊ Tenerife ရှိရောင်းချရန်! 85m2 တည်ဆောက်ထားသော + ၃၅ မီတာကျယ်ဝန်းသည့်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းနှင့်အတူကျယ်ဝန်းသည့် duplex ။ ဒါဟာဓာတ်လှေကား, ကားဂိုဒေါင်ရှိပါတယ် ...
တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ Townhome / Row အိမ်၊
Playa Paraiso တွင်မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများပါသော ၁၀ ထပ်တိုက်ခန်း။
Hard Rock Café၏ရှေ့မှောက်၊ Plener Paraíso၊ Tenerife ရှိရောင်းမည့်လှပသောတိုက်ခန်း! တိုက်ခန်းသည်Paraíso del Sur တွင်တည်ရှိပြီး ...
အိမ်များပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် + မြေကွက်ငှားရန် Taucho, Adeje!
ရောင်းရန်: Jaral, Guia de Isora, Tenerife ရှိလှပသော finca! Adeje မှ Los Gigantes အထိကမ်းခြေတစ်လျှောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများဖြင့် Finca! နှစ် ...
တန်ဂါနာဒေသ၊ လှပသောကျေးလက်အိမ်တစ်အိမ်၊ 80 စတုရန်းမိုင် 800 sq.m. ကြံစည်မှု၊ နှစ်ထပ်အခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ room ည့်ခန်း၊ အိမ်ခြံမြေ ...
ရောင်းရန် - ကမ်းခြေနှင့်မီတာအနည်းငယ်အကွာတွင်ရှိသည့် Tenerife၊ El Poris de Abona၊ တိုက်ခန်းက ...
Playa De San Juan ရှိကျယ် ၀ န်းသောတိုက်ခန်း!
အလွန်ကောင်းမွန်သောတိုက်ခန်း၊ Tenerife၊ Playa de San Juan၊ Guia de Isora ရှိရောင်းမည့်တိုက်ခန်း ပရိဘောဂအစုံအလင်ပါ ၀ င် ...
Las အမေရိကတိုက်, Adeje Tenerife
ရောင်းရန်: Las Americaas (Costa Adeje), Tenerife တွင်တည်ရှိသော Laguna Park I ရှိတိုက်ခန်း။ အိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ ရေချိုးခန်း ၁ ခန်း၊ လွတ်လပ်သောမီးဖိုချောင်၊ ကြမ်းပြင်နံပါတ် ၂၊ အတွင်းခန်း ...
Crab ကျွန်းရှိ Los Villa, Gigantes!
ရောင်းရန်: p ည့်ခန်းကျယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဟင်းလင်းပြင်၊ ရေကူးကန်နှင့်ကားဂိုဒေါင်၊ Los Gignates၊ Tenerife ရှိကားဂိုဒေါင်များပါ ၀ င်သည်။ အိမ်မှာလူနေမှု ...
Los Gigantes Cliffs အားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများပါသောတိုက်ခန်းနှစ်ခန်း!
Senerago del Teide, Tenerife စသည့်ဆိတ်ငြိမ်သောလူနေအိမ်ရာလမ်းပေါ်ရှိ Los Gigantes ကမ်းပါးများ၊ ခမ်းနားသောရှုခင်းများနှင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ခု ...
တိုက်ခန်း၊ ကြန္ဒို / မြို့တွင်း / ရိုးရာအိမ်၊
ရောင်းရန်: မြို့ပြမြေပုံ“ Tagara”၊ Playa de la Arena, Tenerife! သဲသောင်ပြင်မှမီတာ ၁၀၀ မပြည့်မီသောနေရာကောင်း နေသာကျန် ...
Playa De San Juan ရှိကမ်းခြေရှေ့တိုက်ခန်း။
ရောင်းရန်: Tenerife, Playa de San Juan ၏မီးဖိုချောင်ရှိပင်လယ်ကမ်းခြေရှိခေတ်မီတိုက်ခန်း ရှေ့မှောက်၌သီးသန့်တည်နေရာ ...
ကြီးမားသောသမုဒ္ဒရာရှေ့ရှိ Row Home သည် El Medano တွင်ဖြစ်သည်။
ရောင်းရန် - အယ်လ်မက်ဒီနိုသမုဒ္ဒရာရှေ့၊ တနင်္သာရီရှိလှပကျယ် ၀ န်းသောအိမ်ခြံမြေများ ပုဂ္ဂလိကကားဂိုဒေါင်ပါသောသုံးထပ်တိုက်တိုက်အိမ်ရာသည်ကားဂိုဒေါင်မှတိုက်ရိုက်ဝင်ပေါက်နှင့်အတူ ...
ရောင်းရန် - မြို့တော်အတွင်းရှိ“ Flamingo”၊ Palm-mar၊ Tenerife! ပင်လယ်ရေမှမီတာ ၄၅၀ သာလျှင်အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။ မြို့အပေါ်မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ ...
El Medano ရှိကမ်းခြေရှေ့တိုက်ခန်း။
ရောင်းရန်: El Medano, Tenerife ရှိကမ်းခြေရှေ့အိမ်ခြံမြေများ။ ပထမသမုဒ္ဒရာအတန်း အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ! အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
La Tejita သဲသောင်ပြင်အနီးရှိပင်လယ်ရှုခင်းဥယျာဉ်တိုက်ခန်း!
ရောင်းရန်: El Medano၊ Tenrife တွင်ဥယျာဉ်နှင့်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများပါသောတိုက်ခန်းကြီးဖြစ်သည်။2အိပ်ခန်းများတိုက်ခန်း (10m + 8m) + 1 ခန်းမတိုင်ပါ။
San Isidro တွင်ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်း
ရောင်းရန်: စန်အစ်စီဒိုး၊ Tenerife၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော avenida Santa Cruz အလယ်၌တည်ရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောအခြေအနေရှိမီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊
The Ocean မှ ၁၀၀ မီတာရှိသောတိုက်ခန်း။
ရောင်းရန်: Puerto Santiago ရှိတိုက်ခန်းသည်ကမ်းခြေမှမီတာ ၁၀၀ ။ ပထမထပ်မှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။
ကြီးမားသဲသောင်ပြင်ရှေ့တိုက်ခန်း 215 Sq.m. !
ရောင်းရန်: Radazul, Tenerife ရှိကျယ် ၀ န်းသောဇိမ်ခံကမ်းခြေရှေ့တိုက်ခန်း! မြို့တော် Santa Cruz ဘေးတွင်လှပသောအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းကျယ် ...
ကမ်းခြေရှေ့တိုက်ခန်း - Playa Chica
ရောင်းမည်: Playa Chica, Tenerife အနီးရှိရှေ့တန်းတိုက်ခန်း။ Puerto de Santiago ရှိမြို့ဟောင်း၏အလယ်တွင်တည်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ အံ့ဖွယ်မြင်ကွင်းများ ...
Adeje Villas Canarias ရှိပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောတိုက်ခန်း
Tenerife မှ Costa Adeje တွင်ရောင်းရန် - Gran Sur ဈေးဝယ်စင်တာအနီးရှိ“ Villas Canarias” ရှိအသစ်ပြုပြင်ထားသောတိုက်ခန်း။ ရှုပ်ထွေးအတွင်း၌အလွန်ကောင်းသောနေရာ။ အနိမ့် ...
Beachfront ဂူအိမ်, တောင်ဘက်ကမ်းခြေ Tenerife
တောင်ဘက် Tenerife ရှိ Playa Viuda၊ Candelaria တွင်ရောင်းမည့်လှပသောကမ်းခြေဂူအိမ်။ အနားယူရန်ပြီးပြည့်စုံသောတိတ်ဆိတ်သောနေရာ။ TF-1 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုကောင်းကောင်းရောက်နိုင် ...
ကွန်ဒို၊ Townhome / Row Home၊ နှစ်ထပ်၊ အိမ်
တိုက်ခန်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ကျေးလက်အိမ်၊ အိမ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
“ olivia Sunset” ရှိ Corner Sea View တိုက်ခန်း
Tenerife, Playa de la Arena ရှိခေတ်မီတိုက်ခန်းရောင်းမည်။ Los Gigantes areaရိယာ။ ပင်လယ်အမြင်နှင့်ကြီးမားသောထောင့်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်။ ကြီးမားသောရေကူးခြင်းနှင့်ခေတ်မီရှုပ်ထွေးသော ...
Puerto Santiago ရှိတိုက်ခန်းကြီး !!
ရောင်းရန်: Puerto Santiago, Tenerife ရှိတိုက်ခန်း !! Puerto Santiago ၏ဗဟိုတွင်ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်း ကျယ်ဝန်းပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ !! ကလေးများနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်စံပြ။ ကစားကွင်းအနီး, ...
ကော့စတာ del Silencio
Guia De Isora ရှိသမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်လှပသောလုံးချင်း။
ရောင်းရန်: Tenerife, Guia de Isora ၏ဗဟိုတွင်ကျယ် ၀ န်းသောလှပသောအိမ်တစ်လုံး !! တိတ်ဆိတ်သောလမ်းပေါ်တွင်အဆင့်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
အိမ်နှစ်အိမ် + ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုမှာမြေကွက်တစ်ကွက်တွင်!
Tenerife, Santiago del Teide အနီးရှိ Arguayo ရှိအိမ်တလုံး၏အိမ်နှစ်အိမ်။ တည်နေရာအံ့သြဖွယ်ပါတကား! လော့စ်နှင့် ၁၅ မိနစ်သာဝေးသောတိတ်ဆိတ်သောရွာ။
စန်တီယာဂို Del Teide တွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် Town House !!
ရောင်းရန်: စန်တီယာဂို del Teide, Tenerife ရှိပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံရန်မြို့တော်အိမ်နှင့် !! ဗဟိုတည်နေရာအိုင်၏အဓိကလမ်းအလယ် ...
Tenerimo, Tenerife ရှိကျယ် ၀ န်းသောဇိမ်ခံတိုက်ခန်းရောင်းရန်! ကျန်ကြွင်းသောအရပ်မှလှပသောအမြင်များ။ မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာသီးသန့်ရပ်နားရာနေရာ။ ဓာတ်လှေကား။ အပိုသိုလှောင်ခန်း ...
လှပသောတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ သမုဒ္ဒရာရှုခင်းနှင့်လှပသောတိုက်ခန်းတစ်ခန်းနှင့် Los Gigantes ကမ်းခြေတို့သည်အပူရေကန်နှင့်အတူအဆောက်အအုံများတွင်ရောင်းရန်ရှိသည်။ တိုက်ခန်း ၂ ခန်းပါဝင်သည်။
၀ ိုင်ယာခြံနှင့်အိမ်ရောင်းရန်ရှိ Taucho !!
ရောင်းရန်: Taucho, Tenerife ရှိလှပသောအိမ်ခြံမြေ! ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရန် (သို့) အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းငှားရမ်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ အိမ်နှစ်လုံးကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ ...
Arico ခုနှစ်တွင် Patio နှင့်အတူလှပသောအိမ် !!
ရောင်းရန်: Arico Viejo၊ လှပသောနေရာ၌လှပသောအိမ်ကြီးကြီးပါတကား။ အိပ်ခန်း ၅ ခန်း၊ မီးဖိုချောင် ၂ ခန်း၊ living ည့်ခန်း ၂ ခန်း၊ ရေချိုးခန်းသုံးခန်း၊
Puerto De Santiago ၏ကျယ် ၀ န်းသောတိုက်ခန်း။
ရောင်းရန်: Puerto de Santiago, Tenerife အလယ်ဗဟိုရှိတိုက်ခန်းကျယ်။ အိပ်ခန်း3ခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်နှင့် big ည့်ခန်းကျယ်။ မြင်ကွင်းကျယ်ထောင့်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်။ သီးသန့် ...
Plaza De Tamaimo အနီးရှိသမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်အတူမြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း !!
ရောင်းရန် - Tenerife, Plaza de Tamaimo အနီးရှိမြို့ကြီးပြကြီးများ။ Tamaimo ၏ barranco ကန့်သတ်သမုဒ္ဒရာအမြင်များနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာ။ ဘယ်သူမှတည်ဆောက်မှာမဟုတ်ဘူး ...
Tamaimo ခုနှစ်တွင်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းနှင့်အတူမြို့ပြအဆောက်အ ဦး !!
ရောင်းရန်: ၇၀၀ စတုရန်းမိုင် Tamaimo, Tenerife ရှိအိမ်ခြံမြေများ မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာနှင့်တောင်ရှုခင်းများနှင့်အတူ 700% မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးကြံစည်မှု! တိတ်ဆိတ်သောနေရာတွင်ကောင်းမွန်သောတည်နေရာ ...
Tamaimo ရှိ Teide ရန်အဓိကလမ်းမကြီးပေါ်တွင်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများ!
ရောင်းရန်: လမ်းပေါ်ရှိတီမာမိုမြို့ရှိ Teide သို့ကျယ်ပြန့်သောစီးပွားဖြစ်အဆောက်အ ဦး ။ ရုံးရှေ့တွင်ကားမှတ်တိုင် ....
Granadilla De Abona ရှိကျယ် ၀ န်းသောအိမ်။
ရောင်းရန် - ဂရန်းဒီလိုင်ယိုအဘိုနာ၊ ထပ်ထပ်ဆောက်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်း! ကျယ်ဝန်းသည့်အတွင်းပိုင်းဟင်းလင်းပြင်! အိမ်သည်နေထိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Granadilla က de Abona
Arona ၏ဗဟိုတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကိုလိုနီအိမ်ဟောင်း !!
ရောင်းရန်: Tenerife, Arona မြို့၏အလယ်တွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ကိုလိုနီခေတ်အိမ်ဟောင်း! တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာအရမ်းကောင်းသောနေရာ။
ကြီးမားသောကိုလိုနီခေတ်အိမ် + Arona ၏ဗဟိုတွင်ရှိသောမြေ။
ရောင်းရန် - Tenerife မြို့ဟောင်း Arona အလယ်တွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကိုလိုနီအိမ်ကြီးကြီးဖြစ်သည်။ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာအရမ်းကောင်းသောနေရာ။
Playa De San Juan အနီးတွင်ကျယ်ဝန်းသည့်တိုက်ခန်းသစ် !!
ရောင်းရန်: Tenerife, Playa de San Juan ကမ်းခြေမှ ၃ မိနစ်သာကွာဝေးသောနေရာကျယ်ကျယ် ၀ န်းသောအိမ်ခြံမြေအသစ်! တိတ်ဆိတ်သောလူနေအိမ်၏အကောင်းဆုံးတည်နေရာ ...